Ukusebenzisa Amandla Ezokuxhumana Komphakathi - Mashi 16, Tampa | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2010 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 13, 2010 Douglas Karr
Cisha izithende zohambo oluyimpumelelo oluya eNew Orleans lapho uzokhuluma khona Ingqungquthela kaWebtrend Engage 2010, Ngimenyiwe ngu UJeremy Fairley ukuhlala kuphaneli e-University of Tampa's Center for Leadership.
Ngichithe isikhathi esithe xaxa noJeremy ngenkathi ethula izinhlelo zakhe zokubloga eTampa futhi uhlelo lwakhe selwamukelwa kuzwelonke. Uyayiqonda indlela yokukhuthaza iqembu lakhe, ukukala imiphumela, futhi aqhubeke nokwenza ngcono isu lakhe. Ngibheke phambili ekutholeni!
Iphaneli lesidlo sasekuseni lizoxoxa Ukuhlanganisa Amandla Wezokuxhumana Komphakathi Kwebhizinisi. Nayi imininingwane evela kusayithi elisemthethweni:
Isihloko seSocial Media saheha osomabhizinisi ngo-2009. Inqwaba yezingqungquthela nezingxoxo eziku-inthanethi zaphendula lo mbuzo: "Iyini iSocial Media?"
Le ngxoxo yephaneli inyusela ingxoxo ezingeni eliphakeme ngokuhlanganisa ochwepheshe bezeSocial Media abazobhekana nezinyathelo ezilandelayo zokuphendula lo mbuzo obucayi: "Ngiwasebenzisa kanjani amandla weSocial Media ukuze ibhizinisi lami liphumelele?" Ingxoxo izovulwa nge Indaba yempumelelo yenhlangano yaseTampa Bay yeSocial Media, futhi ilandelwe yingxoxo eholwa ngumengameli nochwepheshe ezogxila kuzici ezibucayi zempumelelo ekusetshenzisweni kweMidiya Yezokuxhumana. Okulandelayo, phansi kuzovulelwa imibuzo evela kubahlanganyeli bengqungquthela.
Ukuhambela le ngxoxo yephaneli kuzonika amandla abaholi bamabhizinisi ukuthi bakwazi ukuthola izinzuzo eziyingqayizivele zeSocial Media ukuze kuthuthukiswe ubukhona benkampani ezimakethe. Phakathi kwezinye izihloko, iphaneli lizokhuluma: ukusebenzisa kanjani imithombo yezokuxhumana ngempumelelo futhi kanjani; ukuhlanganisa kanjani ukusetshenziswa kwezinkundla zokuxhumana eziningi; yini imithombo yezokuxhumana engeke yakwazi ukufeza; ibiza malini iSocial Media; indlela yokukala impumelelo; ungayisebenzisa kanjani iSocial Media endaweni ye-B2B nokuthi ikusasa likuphatheleni kwezokumaketha kwe-Social Media.
Uma ungumfundi ovela endaweni yaseTampa Bay noma eBradenton, ngizobe ngihamba ngezinsuku ezimbalwa ngaphambi kwesikhathi ukuchitha isikhathi nabazali bami (eBradenton). Ngicela ungazise ngokushesha uma ungathanda ukuhlangana - kuzofanele ngibhukhe amathikithi kungekudala!
Tags: Sesha MarketingWordPress
Yiba Umkhiqizo Wokuzikhethela